आज नेपाललाई क्रिकेटमा इतिहास कायम गर्ने मौका – आजको खेलको लाईभ भिडियो यहाँ हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > खेलकुद > आज नेपाललाई क्रिकेटमा इतिहास कायम गर्ने मौका – आजको खेलको लाईभ भिडियो यहाँ हेर्नुहोस
आज नेपाललाई क्रिकेटमा इतिहास कायम गर्ने मौका – आजको खेलको लाईभ भिडियो यहाँ हेर्नुहोस
admin January 28, 2019 खेलकुद	0
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) बाट चार वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालका लागि आज एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा इतिहास कायम गर्ने मौका छ।
गत वर्ष एक दिवसीय अन्तर्राष्टिय मान्यता पाएपछिको दोस्रो एक दिवसीय शृङ्खला खेलिरहेको नेपालका लागि पहिलो पटक एक दिवसीय शृङ्खला जित्ने अवसर मिलेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेको नेपालले आज घरेलु टोलीसँग तेस्रो एक दिवसीय खेल खेल्दैछ।
घरेलु टोलीसँग तीन खेलको एक दिवसीय र तीनवटा टी–२० सिरिजका लागि युएईमा रहेको नेपालले आज अन्तिम एक दिवसीय खेल खेल्न लागेको हो। यसअघि भएको पहिलो खेलमा पराजित तथा दोस्रो खेलमा विजयी भएको नेपालले आजको खेल जित्न सके नेपाली क्रिकेट इतिहासमा पहिलो एक दिवसीय शृङ्खला जित्ने इतिहास कायम गर्नेछ।
नेपालले खेलेको पहिलो एक दिवसीय शृङ्खला भने बराबरी भएको थियो। नेपालले गएको असारमा नेदरल्याण्डसँग पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला खेलेको थियो। जुन शृङ्खला १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो।
लाईभ भिडियो यहाँ हेर्नुहोस:
नेपालले शृङ्खला जित्ने जित्ने आधार
युएईको बलियो पक्ष रहँदै आएको ब्याटिङ यो शृङ्खलामा नचल्नु युएई हारको प्रमुख कारण बनेको छ। पहिलो खेलमा युएईलाई नेपालले दिएको ११४ रनको लक्ष्य पछ्याउन हम्मेहम्मे परेको थियो भने दोस्रो खेलमा युएई ९७ रनमै समेटिएको थियो।
युएईका अनुभवी खेलाडी तथा कप्तान रोहन मुस्तफा र रामिज शाहजादको अनुपस्थितिले युएईको ब्याट कमजोर बनेको छ। मुस्तफा र शाहजादसहित एहमद राजा युएई क्रिकेट बोर्डले आठ हप्ताको लागि निलम्बन गरेको छ।
यसैगरी विश्वस्तरीय स्पिनर सन्दिप लामिछानेको उपस्थितिले नेपालको बलिङ पक्ष मजबुत रहेको छ भने सोमपाल कामीको लय पनि उत्कृष्ट रहेको छ। सन्दिप र सोमपालले दुई खेलमा समान छ÷छ विकेट लिइसकेका छन्।
यसैगरी पहिलो खेलको तुलनामा नेपालले ब्याटिङमा निकै सुधार गरेको छ। पहिलो खेलमा ११३ रनमा ‘अल आउट’ भएको नेपालले दोस्रो खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै २४२ रन बनाएको।
नेपालका प्रशिक्षक जगत टमाटाले दोस्रो खेलको जस्तै नेपालले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे आजको खेल जित्ने जिकिर गरे। उनले भने, “बलिङमा हामीलाई समस्या छैन, ब्याटिङ लाइन राम्रो हुनसके हामी शृङ्खला जित्छौँ।”
नेपाललाई पहिलो एक दिवसीय शृङ्खला जित्न आजको खेलमा शनिबारको खेल प्रदर्शनलाई कायम राख्न सक्नुपर्ने कप्तान पारस खड्काको भनाइ छ। दोस्रो खेलमा युवा स्टार रोहितकुमार पौडेलले कीर्तिमानी अर्धशतक बनाएका थिए। रासस
निर्मला पन्तको ‘भेजाइनल स्वाब’सँग आमा दुर्गादेवीको डीएनए मिलेको पुष्टि
रणभूमि बन्यो बिराटचोक… टिप्परले बालिका किचेर मारेपछि यसरी जलाइयो टिप्पर – भिडियोमै हेर्नुहाेस
मेस्सीले बार्सिलोनालाई भने –‘यी तीन खेलाडीलाई जसरी पनि क्लवमा ल्याउनू’
बधाई छ सन्तोषी, जसले रचिन् नेपालकै यस्तो इतिहास
शिक्षकलाई फसाउन किशोरी विद्यार्थीलाई यसरी प्रयोग गरियो
देशैभर परेकाे यस्तो बिपत्तिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिए सरकारलाई यस्तो सुझाव
बिहे गरेको २७ दिनमै चै’ट’भ’यो, २३ बर्षिया बेहुली मृ’त फेला (हेर्नुस् भिडियो)
सामाजिक अभियान्ता ज्वाला संग्रौलाको टो’लीको अ’भिव्यक्तिमाथि छानबिन शुरु
०७८ साल असार ०३ गते बिहिबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ !
०७८ साल असार ०२ गते बुधबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ !
भारतीय नायक सञ्जय दत्तको अवस्था गम्भीर ! सबै फ्यानहरुलाई प्रार्थना गरिदिन आग्रह